Vaviri vari kutiza kuvharirwa kwechiDutch kutsva vakasungwa vachienda kuSpain
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Netherlands Kuputsa Nhau » Vaviri vari kutiza kuvharirwa kwechiDutch kutsva vakasungwa vachienda kuSpain
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Chiitiko chinoshamisa chakaitika kuAmsterdam's Schiphol Airport mundege yaizosimuka kuenda kuSpain kuma 6pm neSvondo.
Ndege payainge yave kuda kusimuka, mapurisa echiDutch akakwira mundege akabvisa vaviri vakaroorana vakatiza muhotera yekuvharirwa nevanofungidzirwa kuti COVID-19 Omicron strain carriers muNetherlands.
Zviziviso zvevaviri vakasungwa hazvina kuburitswa, uye hazvizivikanwe kuti vakatapukirwa here kana kuti vakangochengetwa vakavharirwa senzira yekuzvidzivirira. Mauto akavaendesa kuvakuru vehutano kuti vaendeswe kune imwe nzvimbo inochengeterwa vanhu vari voga.
The Netherlands iri kungwara mushure mekunge nyaya dzinopfuura gumi nembiri dzemhando itsva yeOmicron COVID-19 yawanikwa pakati pevafambi vendege - nyika dzese makumi maviri nenomwe dzeEU dzisati dzabvumirana kurambidza kwenguva rwendo kubva kunyika nomwe dzekumaodzanyemba kweAfrica neChishanu.
Vese vachangobva kusvika kuNetherlands vachibva kuSouth Africa, pamwe nekubva kuBotswana, Malawi, Lesotho, Eswatini, Namibia, Mozambique neZimbabwe, vanga vachinzi vaongororwe nekugariswa kwavo vega kusvika zvavabuda zvazivikanwa, kunyangwe vabaiwa.
Vamwe vanhu makumi matanhatu nenhanhatu kubva muvatakuri makumi matanhatu nevaviri vakaongororwa kuti vane CCIDID-61, saka Dutch National Institute for Health (RIVM) yakayambira kuti "mutsauko mutsva uyu unogona kuwanikwa mune mamwe masampuli ebvunzo."
"Tichadzora kuti vatevedze mitemo iyi," Gurukota rezvehutano reDutch Hugo de Jonge vakazivisa nemusi weSvondo, kwasara maawa mashoma kutiza.